Podcast တခုရှိသလား။ Mic အလံကိုမမေ့ပါနှင့်! | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2015 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကောင်းများထဲမှတစ်ခုမှာတည်ထောင်သူ Joshua Dorkin ဖြစ်သည် BiggerPocketsအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မနေ့က၊ Joshua သည် Facebook တွင်သူ၏ဓာတ်ပုံအသစ်ကိုမျှဝေခဲ့သည် Mic အလံ.
podcasters အများစုသည်၎င်းတို့၏ပြပွဲများကိုဗီဒီယိုဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရန်အချိန်ယူကြသည်။ သင်၏အချိန်ကိုယူပြီးသင်၏ဗွီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုစနစ်တကျတံဆိပ်တပ်ရန်သေချာစေပါ။ တစ် ဦး ချပြီး Mic အလံ သင်၏ podcast အမည်နှင့် URL တစ်ခုပါသောသင်၏မိုက်ခရိုဖုန်းပေါ်တွင်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှိသည်။
Joshua သည်အဖွဲ့မှသူ၏ Mic Flag ကိုဝယ်ယူခဲ့သည် သက်ရောက်မှု PBSလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ Mic အလံကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူ။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်:
လက်ကိုင်မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက် Mic အလံများ - အရွယ်အစားစတုရန်း၊ ထောင့်မှန်စတုဂံသို့မဟုတ်တြိဂံ mic အလံများသည်မည်သည့်အရွယ်အစားကိုမဆိုကိုင်ထားနိုင်သောမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်နီးကပ်စွာထားရန်။
ရေဒီယိုသီးခြား Mic အလံများ - စတိုင်များတွင် Boom နှင့် desktop microphone stands နှစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Impact Studio အလံ EV309 shock Mount, Shure SM7s နှင့် Clips တို့ပါ ၀ င်သည်။
မျှော်စင်များအတွက် Mic အလံများ - သက်ရောက်မှုတာဝါသည်ဘက်ပေါင်းစုံမှ ၁၆″ x ၃ color အရောင်ပြည့်စုံသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးနေရာဖြစ်သည်။ မည်သည့်သမားရိုးကျမိုက်ခရိုဖုန်းမဆိုလိုက်ဖက်သည်
blank Mic အလံ - Impact PBS သည် Blank Microphone Flags ကိုအရောင်ခြောက်မျိုးနှင့်စတိုင်နှစ်မျိုးဖြင့်ပေးထားသည်။
အခြားကြော်ငြာပစ္စည်းများ - နဖူးစည်းစာတန်းများ၊ ကြိုးများ၊ ဘန်ပါစတစ်ကာများနှင့်အခြားအရာများ။
စာရင္းသြင္းရန္ Youtube ပေါ်ရှိ BiggerPockets 'ဗီဒီယိုများ နှင့်စာရင်းသွင်းပါ BiggerPockets အိမ်ခြံမြေ podcast.
Tags: ပိုကြီးjoshua dorkinmic အလံများမိုက်ခရိုဖုန်းအလံpodcast mic အလံအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ
ယောရှု Dorkin @ BiggerPockets.com
10:2015 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 59 တွင်
မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Doug! အများကြီးတန်ဖိုးထား!